Archive du 20200120
Tsy fahatomombanan’ny fambolen-kazo Sabotazy sa tena tsy fahaiza-miasa ?
Tahaka izao ny zava-nisy tany amin'ny fambolen-kazo tany Ankazobe omaly alahady 19 janoary. Nitaraina avokoa ireo olona nandeha namboly hazo satria ratsy sy tsy mazava ny fikarakarana.
Fampandrosoana Tsy afa-manilika fintsony ny mpitondra
Tsy misy sakana tokony tsy hampandroso ny firenena sy hahafahan’ny fanjakana ankehitriny mamaha ny olana intsony. Efa loko tokana sy firehana iray no maro an’isa sy mpanapa-kevitra eto.
Andry Rajoelina Iankinan’ny ain’ny taranantsika ny ala
Ny hazo izay volentsika androany dia ho zary ala hiantoka tontolo vaovao ho an’ireo taranaka fara aman-dimby,
Itodihana ny lasa, atrehina ny ny ankehitriny, banjinina ny ho avy.
Lalao facebook M’lay Lasan-dRavoninjato Jean Fred ny Scooter
Ravoninjato Jean Fred no nandrombaka ilay môtô scooter tsara tarehy, miaraka amin’ny aro loha, fanomezana nomena ireo mpandray anjara tao anatin’ilay lalao facebook m’lay nokarakarain’ny orinasam-pifandraisana Airtel.
Voan-janakazo afafy amin’ny fiaramanidina Velon’ahiahy ireo teknisianina
Tsy te haneho hevitra mivantana hatreto ireo teknisianina momba ny ala noho ny antony maro samihafa.
Nihetsika indray Ambohitrimanjaka “Tsy omenay ny taninay”
Nihetsika indray ny mponina eny Ambohitrimanjaka ny sabotsy teo manohitra ilay tetikasa Tanamasoandro, kasain’ny fitondrana ankehitriny hotanterahina eny an-toerana.
Mpampianatra FRAM Hosintonina ny “contrat de travail” n’ireo manao diplaoma hosoka
Mpampianatra FRAM miisa 624 no noraisin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ho mpiasam-panjakana ny sabotsy teo tetsy amin’ny INFP Mahamasina.
Fandaminana an’Anosibe Mangataka tsena vaovao sy asa ho an’ny tanora ireo mpivarotra
Niverina namonjy ny toerany sahady nanomboka ny sabotsy maraina teo ireo mpivarotra amoron-dalana sasany etsy Anosibe taorian’ilay korontana nitranga teny an-toerana ny zoma alina teo.
Baolina kitra - Barikadimy Cosfa Analamanga 2- 2 ekipa voafantin’Atsinanana
Nirava ady sahala 2-2 omaly alahady 19 janoary tany amin’ny kianja sentetikan’i Barikadimy Toamasina ny ekipan’ny Cosfa Analamanga sy ny ekipa voafantin’ny Ligin’Atsinanana nahita betsaka ny